जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? एक चोटी अबश्य पढ्नुहोस् « Gaunbeshi
त्यसैले श्रीमान श्रीमतीकोे नै परिक्षण गराउनुपर्छ ।महिलामा बाझोपना हुनुका कारणहरु पाठेघरको छेउको गर्भ नलि बन्द भएर ।
डिम्बाशयबाट अण्डा ननिस्कदाँ । पाठेघर भित्र मासुको डल्लो ‘ट्युमर’ पलाएमा । थाहा नभएको कारण । सबै उपचार गरिसके पनि गर्भ नबसेको ।उपचार बाझोपना कुन कारणले भएको हो त्यहि अनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौ । मंगलवार महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । एकै
आयो सुखद् खबर ! कोभिड संक्रमणको असरलाई कमजोर बनाउने जीन पत्ता लाग्यो
काठमाडौ । विश्वभर कोभिडको नयाँ भेरियन्टको महामारी फैलिएको बेला विज्ञहरुले एक सुखद् खबर सार्वजनिक गरको
संक्रमण बढेपछि सरकारले आइतवारवाट लागू गरेको नयाँ नियम के के छन् ?
काठमाडौ । सरकारले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश,